यीनै हुन आज विहान कोहलपुर’को दु’र्घटना’मा ज्या’न गुमाए’का २५ वर्षिय क्रिकेट खेलाडी बिरेन्द्र ! – Dainiki Online
02/03/2021 02/03/2021 adminLeaveaComment on यीनै हुन आज विहान कोहलपुर’को दु’र्घटना’मा ज्या’न गुमाए’का २५ वर्षिय क्रिकेट खेलाडी बिरेन्द्र !
भे१०प ५६१ नम्बरको मोटरसाईकलमा सवार शाही’लाई बसले ठ’क्क’र दिए’को थियो । शाही’को घ’टनास्थ’लमै मृ’त्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ । पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको बस र पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको मोटरसाइक ए’कआपस’मा ठो’क्किए’का थिए ।दु’र्घटना’मा अन्य २ जना घा’ईते भए’का छ’न । तिब्र गतिमा रहेको बसले मोटरसाईकलसँगै पैदलयात्री र साईकलमा सवार ब्यक्तिलाई समेत ठक्क’र दिए’को थियो ।